guide umsebenzisi ukuba wabaqalayo ngorhwebo forex – FX-Consultant
12. EyoMsintsi 2017 admin Blog
Kukho ezininzi zeencwadi ukulungiselela le wabaqalayo abangakwaziyo ukufumana nayiphi intembelo impumelelo abathengisa forex. Iincwadi Currency Trading for Dummies - ngu Mark kungaweli no Brian Dolan, Trading Day kwaye Swing Trading le Market lwemali: Iindlela zobungcali Okubalulekileyo ukuzuza Ihamba Market - ngu nilala, Complete Turtle Trader - ngu Covel, Le nkampu Boot FX Guide to qhinga kunye Tactical Forex Trading - ngu Wayne McDonell . Apha omnye saqala angasifumani impendulo yakhe ezinqwenelekayo Umbuzo wakhe. Wayengumqalisi sazi ngakumbi yorhwebo forex yintoni? Ingaba isebenza kanjani? Indlela ukuba umrhwebi ngempumelelo? Okunene apha ngazo iincwadi ezintathu top ukuphakama ngoziro urhwebo forex.
isifundo self encwadini borhwebo forex
Le yenye yezinto ezininzi ezithandwayo for self ukufunda saqala ofuna impumelelo ukuba ukurhweba kwakhe. Ikakhulu ezikuyo angundoqo kakhulu eyimfuneko yorhwebo forex kunye nohlalutyo lobugcisa inqanaba ngcono. nezinye iincwadi ezininzi ziyafumaneka malunga urhwebo forex kodwa ezi ncwadi ukunika ulwazi eyodwa abarhwebi.
trading Day & imali yokurhweba kwi Market
bamkelekile Uninzi ngokuba abaqalayo kule norhwebo forex ekuqaleni iincwadi ezibhalwe Kathy nilala. Le ncwadi encinane kodwa kuluncedo kakhulu wayengumqalisi. Ukuba nabani na ufuna ukufunda okungakumbi ngalo zorhwebo forex yena / kufuneka kuqokelela incwadi ukuba ncwadi kakhulu kwangaphambili ukuba ukunika impumelelo. Umsebenzisi uyakwazi ukugcina intembeko ngale ncwadi.
Le urhwebo forex ufuna essentials ezilishumi
Incwadi ezilishumi ebalulekileyo yorhwebo forex incwadi umdla kakhulu abarhwebi forex abo kakhulu ufuna ukuphumelela ukuswela yakhe. Le ncwadi ibhalwe ngomnye umbhali emakhulu F. Martinez leyo enye ingcali kakhulu ehlabathini forex sorhwebo. Naye ilungu Uphawu nangokwasengqondweni trading, le ncwadi has ukhetho umsebenzisi ongeze / uluvo lakhe malunga nempumelelo forex sorhwebo.
Izicwangciso ezisixhenxe lokuwina ngorhwebo forex
Le ncwadi ngokufutshane uyachaza ukuphucula indlela abasebenzisi kutshintsha norhwebo forex. Kwakhona lisa iimbono zokurhweba yaye ndacinga nto kubalulekile ukuba nabani na ibandakanya kunye norhwebo forex. Le ncwadi ibhalwe ngu ezizezi Grace Cheng, umrhwebi osebenza ekuvavanyweni ixesha elizeleyo borhwebo forex kwakhona umrhwebi self-lolawulo.
Ukuba awukwazi ukufumana impendulo yakho ezinqwenelekayo kule ncwadi unako kwakhona phendla norhwebo forex wayihlaba kwi iincwadi zokuthengisa forex kwi link. Kulungile. Ukuba iincwadi zakho ozithandayo borhwebo forex ayidweliswanga apha. Ke ungaqhagamshelana ne ngenkxaso yethu. Ndicinga ukuba kwakhona ujonge le ncwadi uza kukwazi ukufumana impendulo yakho. Kwelinye icala xa ufumanise ukuba iincwadi zakho forex yorhwebo owathandayo ngoko unga uphumelele ngorhwebo lwakho forex siqu. Kuye kakhulu wancoma ukuba ndiyakuqinisekisa impumelelo forex sorhwebo.
Previous Post:Iintlobo ezahlukileyo Binary Iinketho